SONATA-CANTATA: Happy Blog Day 2014
လွမ်းတယ် မ ရေ...
Same to you par, ma ma Thida! :) Miss you!!!
ခါးအညောင်းခံ ဆေးလိမ်းပြီး ကြိုးစားသွားတယ်လို့ သိရတာနဲ့တင် ကျေနပ်သွားပါပြီ သီတာရေ.. တီတင့်လဲ စကားလုံးချောချောလေးတွေ မရေးတတ်တော့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ကိုပဲ စကားပြောနဲ့ရေးလေ့ရေးထ ရှိတယ် သီတာ...နှစ်ပတ်ကြာပစ်ထားတဲ့ ဘလော့လေး ပြန်ဖုံခါပေးတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာတယ် ပျော်တယ် ..
သီတာ...သတိရနေတာ... နေကောင်းကြရဲ့လား။ သားကြီးသားငယ်ကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ထင်ရဲ့။ မိသားစုအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်း မေတ္တာပို့သလျှက်....